Blockchain - Iyo Ramangwana RezveMari Technology Martech Zone
Blockchain - Iyo Ramangwana RezveMari Technology
Chipiri, April 2, 2019 Chipiri, April 2, 2019 Kenneth Evans
Iwo mazwi cryptocurrency uye blockchain ave kuwanikwa kwese kwese. Kutarisisa kwakadai kweruzhinji kunogona kutsanangurwa nezvinhu zviviri: mutengo wakakwira weBitcoin cryptocurrency uye kuomarara kwekunzwisisa kukosha kweiyo tekinoroji. Nhoroondo yekubuda kwemari yekutanga yedhijitari uye nehunyanzvi hweP2P tekinoroji inotibatsira kuti tinzwisise idzi "crypto sango".
Pane tsanangudzo mbiri dzeBlockchain:
• Inoenderera yakateedzana cheni yemabhuroko ane ruzivo.
• Dhatabhesi yakaparadzirwa yakadzokororwa;
Iwo ese echokwadi muzvinhu zvavo asi haape mhinduro kumubvunzo wekuti chii. Kuti unzwisise zvirinani tekinoroji, zvinodikanwa kuti urangarire kuti ndeapi makomputa maratidziro ekuvaka aripo uye ndeupi wavo anotonga yazvino IT system musika.
Pakazara pane marudzi maviri ezvivakwa:
Networking munzira yekutanga zvinoreva kutonga kwepakati pezvose: zvishandiso, data, kuwana. Yese system logic neruzivo zvakavanzwa mukati me server, iyo inoderedza mashandiro ekuita kwevatengi zvigadzirwa uye inovimbisa yakakwira yekugadzirisa kumhanya. Iyi nzira yakagamuchira kutarisisa mumazuva edu.
Peer-to-peer kana network dzakatemerwa hadzina tenzi, uye vese vatori vechikamu vane kodzero dzakaenzana. Mumuenzaniso uyu, mushandisi wega wega haasi iye mutengi chete asiwo anova mupi webasa.
Shanduro yekutanga yevezera-kune-vezera network ndeye USENET yakagovaniswa mameseji sisitimu yakagadziriswa muna 1979. Makumi maviri emakore akatevera akaratidzirwa nekugadzirwa kweP2P (Peer-to-Peer) - zvinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana zvachose. Imwe yeiyo mienzaniso inonyanya kuzivikanwa ndeye sevhisi yeNapster, iyo yaimbove-yakakurumbira peer-to-peer faira yekugovana network, kana BOINC, software papuratifomu yekuparadzira komputa, uye iyo BitTorrent protocol, inova hwaro hwevatengi vemazuva ano torrent.
Masisitimu akavakirwa pamatanho akasarudzika anoramba aripo, asi zvinonzwisisika anorasikirwa nemutengi-server mukuwanda uye kutevedzera zvinodiwa nevatengi.
Iyo yakanyanya kuwanda yezvishandiso uye masisitimu eakajairika mashandiro anoda kugona kwekushandisa data seti. Kune nzira dzakawanda dzekuronga rakadai basa uye imwe yacho inoshandisa iyo peer-to-peer nzira. Yakagoverwa, kana yakafanana, dhatabhesi anosiyaniswa nenyaya yekuti ruzivo muchikamu kana ruzere runochengetwa pane yega yega kifaa che network.
Imwe yemabhenefiti eiyi sisitimu ndiko kuwanikwa kwedata: hapana kana poindi imwechete yekutadza, sezvazvinoitika kune dhatabhesi iri pane imwechete server. Mhinduro iyi zvakare ine zvimwe zvinogumira pane yekumhanyisa yekuvandudza dhata uye kuigovera pakati penhengo dzenetiweki. Sisitimu yakadaro haizopikisane nemutoro wemamirioni evashandisi vari kugara vachitsikisa ruzivo rutsva.
Iyo blockchain tekinoroji inofungidzira kushandiswa kweyakagovaniswa dhatabhesi yemabhureki, ayo ari akabatanidzwa runyorwa (rimwe nerimwe rinotevera diki rine chinongedzo cheiyo yapfuura). Nhengo yega yega yemambure inochengeta kopi yemabasa ese anoitwa nguva dzese. Izvi zvaisazogoneka pasina humwe hutsva hwakagadzirirwa kuona kuchengetedzeka uye kuwanikwa kwenetiweki. Izvi zvinotisvitsa ku blockchain yekupedzisira "mbiru" - cryptography. Iwe unofanirwa kubata a nhare mbozha yekuvandudza kambani kuhaya blockchain vagadziri kuti vabatanidze tekinoroji iyi mubhizinesi rako.
Mushure mekufunda izvo zvakakosha zvinhu uye nhoroondo yekugadzirwa kwetekinoroji, inguva yekupedzisira kubvisa ngano inosanganisirwa neshoko rekuti "blockchain". Funga nezvemuenzaniso wakapusa wekutsinhana kwemari yedhijitari, musimboti wekushanda kwetekinoroji ye blockchain isina makomputa.
Ngatitii tine boka revanhu gumi vanoda kugona kuita mashandisirwo emari kunze kwenzvimbo yekubhengi. Funga zvakateerana zviito zvinoitwa nevatori vechikamu muhurongwa, uko blockchain inomiririrwa nemapepa enguva dzose:
Mumwe nemumwe anotora chikamu ane bhokisi raachawedzera machira neruzivo nezve zvese zvakapedziswa zviitiko muhurongwa.
Iyo Nguva Yekutengeserana
Mumwe nemumwe anotora chikamu anogara nepepa nepeni uye akagadzirira kunyora zvese zvinoitiswa.
Pane imwe nguva, mutori wenhamba 2 anoda kutumira madhora zana kumutori wechikamu nhamba 100.
Kuti upedze mutengapowo, Mutori chikamu No. 2 anozivisa munhu wese kuti: "Ndiri kuda kuendesa madhora zana kuenda kuNhamba 100, saka nyora izvi papepa rako."
Mushure meizvozvo, munhu wese anotarisa kuti aone kana Mutora chikamu 2 ane chikero chakakwana kupedzisa iko kutengisa. Kana zvirizvo, munhu wese anonyora nezve kutengeserana pamashiti avo.
Mushure meizvozvo, mutengano unoonekwa sewakakwana.
Nekufamba kwenguva, vamwe vatori vechikamu vanodawo kuita kuchinjanisa mashandiro. Vatori vechikamu vanoramba vachizivisa uye kunyora zvese zvezviitiko zvakaitwa. Mumuenzaniso wedu, gumi zvekushambadzira zvinogona kurekodwa pane rimwe jira, mushure meizvozvo zvakakosha kuisa pepa rakapedzwa mubhokisi uye wotora nyowani.
Kuwedzera Sheet kuBhokisi
Ichokwadi chekuti jira rakaiswa mubhokisi zvinoreva kuti vese vatori vechikamu vanobvumirana nekuvimbika kweese mashandiro akaitwa uye kusakwanisika kwekuchinja pepa mune ramangwana. Izvi ndizvo zvinovimbisa kutendeka kwezvese zviitiko pakati pevatori vechikamu vasingavimbi.
Chikamu chekupedzisira inyaya yakajairika yekugadzirisa dambudziko revakuru veByzantine. Mumamiriro ezvinhu ehukama hwevatori vechikamu vari kure, vamwe vacho vanogona kunge vari vapambi, zvakafanira kutsvaga zano rekukunda revose. Maitiro ekugadzirisa dambudziko iri anogona kutariswa kuburikidza neiyo prism yemakwikwi emamodeli.
Mumunda wezviridzwa zvemari, Bitcoin, iri yekutanga mass cryptocurrency, yakanyatsoratidza maitiro ekutamba nemitemo mitsva isina vamiriri uye kutonga kubva kumusoro. Nekudaro, pamwe yakatonyanya kukosha mhedzisiro yekubuda kweBitcoin kwaive kugadzirwa kwe blockchain tekinoroji. Bata blockchain makambani ekuvandudza kuhaya blockchain vagadziri kuti vabatanidze tekinoroji iyi mubhizinesi rako.
Tags: blockchainblockchain kuvandudzaBlockchain teknolojiaZvemari Technology
Chii Robotic Process kushandisa michina?
Nzira Shanu dzeKukwidza Yako Yemukati Yekutengesa Mutambo